कसरी कुकुरलाई छिमेकीहरु मा भौंकने बाट रोक्न कुकुरहरु को विश्व
कसरी कुकुरलाई छिमेकीहरु मा भौंकने बाट रोक्न
राहेल सान्चेज | | प्रशिक्षण
छाल तिनीहरू छिमेकीहरू बीचको विवादका लागि प्रायः जसो कारणहरू हुन्। र यो यो हो कि जब उनीहरूले तिनीहरूको धम्की दिएका क्षेत्रहरू महसुस गर्छन्, कुकुरहरूले प्राय: शृंखलाहरू उत्सर्जन गर्दछन् भौंक तपाईंको उपस्थितिको सम्भावित घुसपैठाहरूलाई चेतावनी दिन द्रुत र गम्भीर। यद्यपि यो जनावरहरूमा पूर्ण रूपले सामान्य व्यवहार हो र प्राय: केहि मिनेट भन्दा लामो समय सम्म चल्दैन, हाम्रा छिमेकीहरूको सहिष्णुता स्तर सँधै उचित हुँदैन।
कहिलेकाँही यस्ता किसिमका समस्याहरूबाट बच्न सम्भव छैन, तर निस्सन्देह यदि हामी हाम्रो घरपालुवा जनावरलाई ढोका नजिकका छिमेकीहरूतिर लागी चुपचाप प्रतिक्रिया गर्न सिकाउन सक्छौं भने यो सजिलो हुन्छ। हामी तपाईंलाई दिन्छौं केहि कार्यनीति यसको लागी।
1 चिच्याउने र सजाय पाउँदैन
2 अवस्थाको चार्ज लिनुहोस्
3 सकारात्मक सुदृढीकरण
चिच्याउने र सजाय पाउँदैन
हाम्रो कुकुरलाई शान्त पार्न हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको चिच्याउनु वा त्यसलाई गाली गर्नु हो, किनकि यसले केवल उसको स्नायु बढाउनेछ र उसको बोक्रा बढी बनाउँछ। यसैले यो उत्तम छ कि हामीले शान्तपूर्वक प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ। आफ्नो शान्त नगरीकन तर दृढतापूर्वक कार्य गर्दै। बलपूर्वक कुकुरलाई रोक्न पनि यो एक राम्रो विचार होईन, किनभने यस तरिकाले हामी यसको चिन्तालाई सुदृढ पार्नेछौं। र, निस्सन्देह, शारीरिक सजाय पूर्ण रूपमा प्रश्न बाहिर छ।
अवस्थाको चार्ज लिनुहोस्
सब भन्दा प्रभावकारी विधि भनेको पशुलाई यो बनाउनु हो कि यो हामी हो जसले परिस्थितिको नियन्त्रण लिनै पर्छ। यो सजिलो छैन, विशेष गरी यदि हाम्रो कुकुर घबराएको छ। हामीले देखाउनु पर्छ अपार शान्त, आफैलाई ढोका अगाडि राख्दै र सानोलाई टाढाबाट टाढा बनाउँदै। एकचोटि कुकुर मौन भएपछि, हामी संकेत दिन्छौं जुन कुकुरले सजिलै पहिचान गर्न सक्दछ; उदाहरण को लागी, तपाईको हातको हत्केला देखाउँदै।
हामी यस स्थितिमा रहन्छौं जब सम्म आवाज समाप्त हुँदैन, त्यो छ जब सम्म छिमेकीले छोड्दैन। त्यसो भए हामी पहिले केहि नगरी काम गरिरहेका थियौं। यस तरिकाले, कुकुरले यो बुझ्दछ हामी घरको रक्षाको लागि जिम्मेवार छौं धम्कीको सामना गर्नुपर्दा र तपाईं यसलाई बचाउको लागि आवश्यक हुने छैन। बिस्तारै बिस्तारै बन्द नभएसम्म ऊ अलि अलि बुझ्नेछ।
अर्को राम्रो विचार भनेको पशुलाई छिमेकीहरूको ध्वनिलाई केहि सकारात्मक प्रोत्साहनको साथ जोड दिनको लागि हो। हामी माथि वर्णन गरिएको जस्तै समान व्यायाम प्रदर्शन गर्न सक्दछौं मिठाई वा खाजा, जुन हामी कुकुरलाई दिनेछौं जब ऊ ढोकाबाट टाढा हिँड्छ र भौंक्न बन्द गर्छ। अर्को रणनीति भनेको उसलाई तपाईंको ओछ्यानमा वा विश्राम गर्ने ठाउँमा जानको लागि प्रोत्साहित गर्नु हो जब छिमेकीहरू त्यहाँबाट जान्छन्, र त्यहाँ उसलाई केही टुक्राहरू पनि दिन्छन्।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा समय र धैर्यता लाग्छ। जहाँसम्म, केहि अवसरहरूमा यो रिसोर्ट गर्न आवश्यक छ पेशेवर ट्रेनर। हाम्रा छिमेकीहरूसँग कष्टकर झगडाबाट बच्न यो लायक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » प्रशिक्षण » कसरी कुकुरलाई छिमेकीहरु मा भौंकने बाट रोक्न
र मेरो कुकुर किन भुक्न सक्दैन र किन छिमेकीहरू चिच्याउन सक्दैनन्, टिभी माथि राख्छन् वा तिनीहरूका बच्चाहरू रुँदैनन्? मेरो कुकुर रोए जस्तै भुक्छ वा तिम्रा छोराछोरी रुन्छन, एउटा अर्को सामुदायिक कार्य र जो कोही पनि एकान्त पहाडमा बस्छ। सामुदायिक उपद्रवहरू सबैका लागि हुन्, कुकुरहरू मात्र होइन।
के यो कुकुर लुगा लगाउन सल्लाह दिइन्छ?
कुकुरहरूमा डाइट र किडनी ढु stones्गा